Zakarie Abdi – Page 147 – Filimside.net
Articles by Zakarie Abdi
Kadib Padmaavat: Deepika 4-Blockbuster, Shahid 2-Blockbuster, Ranveer 1-Blockbuster & Sanjay Bhansali 1-Blockbuster
March 11, 2018 Zakarie Abdi
Shabakada Boxoffice India ayaa si rasmi ah u xaqiijisay in Padmaavat uu yahay Blockbuster-ka ugu horeeyay 2018 sidoo kalena filimkaan guul lixaad leh gaaray. Hadab guusha filimka Padmaavat gaaray hogaamiyaasha mashruucaan iyo kooxdii sameesay wax […]
Boxoffice India: Padmaavat waa BLOCKBUSTER-ka ugu horeeyo 2018
Shabakada BOI ayaa cadeesay in filimka Padmaavat uu noqday Blockbuster-ka ugu horeeyo 2018 ay Bollywood-ka helaan kadib markii ganacsi lixaad leh uu ka sameeyay gudaha Hindiya iyo suuqyada caalamka. Padmaavat ayaa weli ganacsi adag sameenayo todobaadkiisa […]
Nawazuddin Siddiqui oo beeniyay in lagu dacweeyay xaaskiisa Taleefonkeeda gaarka ah inuu baaray fasax la’aan!
Jilaaga caanka ah Nawazuddin Siddiqui ayaa la sheegay in dacwad xaaskiisa kusoo oogtay kadib markii fasax la’aan ama amar la’aan u baartay macluumaadka taleefonkeeda ka jiro. Saxaafada Hindiya ayaa hadal heesay in Nawazuddin Siddiqui uu jaajuus ku […]
Shabakada BOI oo ku tilmaantay filimka Sonu Ke Titu Ki Sweety Blockbuster naadir ah!
March 10, 2018 Zakarie Abdi
Kartik Aaryan, Nushrat Bharucha iyo Sunny Singh filimkooda Sonu Ke Titu Ki Sweety ayaa Blockbuster rasmi ah noqday sida shabakada Boxoffice India cadeesay. Filimka Sonu Ke Titu Ki Sweety ayaa ganacsi adag sameeyay jimcadiisa sedexaad wuxuuna keenay 1.75 Crore ilaa 2 Crore lacago […]
Kulanti wacan kuna soo dhawaada xubinteenii aan idin kugu soo gudbin jirnay warbixino ku saabsan filimada dhawaan la daawan doono iyo kuwa haatan shaqada laga haayo. Waxaa siweyn loo wada sugayaa Varun Dhawan filimkiisa cusub October goos […]
Bobby Deol oo muuqaal 20-jir lasoo baxay ka hor inta uusan Dubai u safrin jadwalka ugu dambeeyo Race 3 (+sawiro)
Bobby Deol sanadkaan 2018 mid qaas ayuu u yahay wuxuu maalmo ka hor soo idleeyay duubista filimka la wada sugaayo Yamla Pagla Deewane 3 oo ay la jilayaan Dharmendra iyo Sunny Deol halka Salman Khan, […]
Bajrangi Bhaijaan oo ganacsi adag sameeyay Jimcadiisa labaad dhul weynaha China saaran yahay
Filimka Bajrangi Bhiajaan ayaa diidan inuu ka haro loolanka tiyaatarada gudaha China ka jiro asigoo todobaadkiisa labaad guda galay. Filimka BB ayaa keenay $1.70 million wuxuuna sameeyay 20% hoos u dhac marka lala bar bar dhigo Jimcadiisii […]
Rasmi: filimka Hate Story 4 iyo maalintiisa kowaad ganacsiga uu guddaha Hindiya ka sameeyay
Filimka Hate Story 4 ayaa ganacsi dhex dhexaad ah sameeyay maalintiisa kowaad asigoo keenay 3.25 Crore ilaa 3.50 Crore ganacsi u dhaxeeyo sida shabakada BOI soo daabacday. Ganacsiga Hate Story 4 waa mid la aqbali karo balse culeeska wuxuu kaga imaanaa […]
Kadib geeridii Sridevi: Jhanvi Kapoor oo duubista filimka Dhadak amba qaaday
March 9, 2018 Zakarie Abdi
Atirishada dhalinta yar Jhanvi Kapoor filimkeeda kowaad Dhadak waxay la jileysaa Ishan Khatar balse gabadhaan shaqada ay filimkeeda kowaad ka waday hakad ayuu ku yimid kadib markii hoyadeed Sridevi ay geeriyootay. Haatan Jhanvi Kapoor ayaa […]
Sawir walbo oo laga soo bandhigay Ranbir iyo Alia oo duubayaan filimka Brahmastra ayaan idiin soo aruurinay
Waxan horey idin kula wadaagnay in Karan Johar uu ku dhawaaqay inuu maal galinaayo filimka Brahmastra oo taxane noqon doono sidoo kalena Super Hero ah. Filimka Brahmastra waxaa hogaamiyaal ka ah Ranbir Kapoor iyo Alia Bhatt halka […]
« 1 … 146 147 148 … 341 »